सावधान ! यी हुन सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड « Postpati – News For All
सावधान ! यी हुन सबैभन्दा कमजोर पासवर्ड
यो वर्ष सन् २०१८ मा सबैभन्दा धेरै ह्याक भएका वा सर्वाधिक कमजोर पासवर्डको खुलासा भएको छ ।
साइबर सेक्योरिटी फर्म स्प्लास डाटाले यसको खुलासा गरेको हो ।
वर्षको सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको सूचिमा १२३४५६ सबैभन्दा अगाडि रहेको छ । १२३४५ सबैभन्दा कमजोर पासवर्डको पहिलो स्थानमा रहेको यो लगातार पाँचौँ वर्ष हो ।
त्यस्तै password शव्द कमजोर पासवर्डको दोश्रो स्थानमा रहेको पनि पाँचौ पटक हो ।